Faransiiska oo yeeshey Madaxweyne cusub,maxaad ka taqaan mweynaha Cusub ee farasiiska. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Faransiiska oo yeeshey Madaxweyne cusub,maxaad ka taqaan mweynaha Cusub ee farasiiska.
Faransiiska oo yeeshey Madaxweyne cusub,maxaad ka taqaan mweynaha Cusub ee farasiiska.
Emmanuel Macron ayaa ku guulaystay doorashada madaxtinnimada Faransiiska, asagoo helay ku dhawaad 65.5% codadkii la dhiibtay, halka haweeneydii la tartamaysay ee Marine Le Pen, ay heshay ku dhawaad 34.5%.
Macron ayaa ah 39 jir aan horay loogu dooran wax xil ah, waxa uuna noqonayaa madaxweynihii ugu da’da yaraa ee soo mara Faransiiska.
Mr Macron ayaa sidoo kale noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee tan iyo sanadkii 1958 ka soo baxa xisbi aan ahayn labada axsaab ee ugu waaweyn Faransiiska.
Waxaa uu sheegay madaxweynaha la doortay in bog cusub uu u furmay taariikhda Faransiiska.
“Waxaan dhagaystay carada, walwalka iyo shakiga aad muujiseen qaar badan oo idinka mid ah,” ayuu yiri madaxweynaha cusub, asagoo wacad ku maray in shanta sano ee soo socota uu ka shaqeyn doono mideynta shacabka dalkiisa.
Kumannaan taageerayaasha Macron ah ayaa isugu soo baxay bartamaha caasimadda Paris, halkaas oo uu kula hadlay madaxweynaha cusub.
Madax badan oo caalamka ah, oo uu ka mid yahay Trump-ka Maraykanka ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha la doortay ee Faransiiska.
Previous articleSarkaal ka tirsan laamaha Amniga oo lagu dhaawacey Qarax ka hacey wadada Maka ALmukarama ee magaaladan Muqdisho.
Next articleWafdi Horadhac ah oo Dawladda Soomaaliya u dirtey Dalka Britain iyadoo madaxda qarankuna u diyaar garoobeen.